[OFFICIAL] dr.fone yamathuluzi - iOS WhatsApp Dlulisa, Isipele nokubuyisela esimweni
dr.fone yamathuluzi - iOS WhatsApp Dlulisa, Isipele nokubuyisela esimweni
Yiphathe WhatsApp Yakho Chat, Kalula & kalula
Dlulisela iOS Whatsapp iPhone / iPad / iPod touch / amadivayisi we-Android.
imiyalezo Backup noma ukuthekelisa iOS WhatsApp kumakhompyutha.
Buyisela iOS WhatsApp isipele iPhone, i-iPad, ne-iPod touch namadivayisi we-Android.
Dlulisela WhatsApp Umlando Kalula futhi Khetha
Kungakhathaliseki une idivayisi ezingaphezu kweyodwa noma nje ufuna ukushintsha idivayisi yakho endala nge entsha, ungasebenzisa lolu hlelo ngokukhetha uthumele umlando wakho wengxoxo WhatsApp phakathi iPhone yakho ne-iPad. Ngemva ukushintsha kudivayisi ye-Android, futhi kungakusiza ukuze uthumele Whatsapp izingxoxo kusuka ku-iPhone / iPad kudivayisi yakho entsha ye-Android. Iyiphi into ofuna, kuhlanganise nezinamathiselo.
Dlulisela WhatsApp Imilayezo Khetha
Ungadlulisela imiyalezo WhatsApp kusuka iOS iOS noma amadivayisi we-Android ngokukhetha.
Isipele WhatsApp Imilayezo Kalula
You can isipele imiyalezo Whatsapp iPhone yakho / iPad kwikhompyutha ngokuchofoza okukodwa.
Buka kuqala WhatsApp Backup sokuqukethwe
Ungafunda yonke imininingwane kufayela lakho WhatsApp isipele, efana imiyalezo nezinamathiselo. Buka okufunayo.
Export Imilayezo esuka WhatsApp Backup
Ungakwazi ngokukhetha ukuthekelisa imilayezo evela WhatsApp isipele njengoba ifayela le-HTML. Kuhle kuwe ukuphrinta noma wabelane ngakho.
Buyisela WhatsApp Backup
Njengoba ukubuyisela imiyalezo WhatsApp, ungayibuyisela kokubili iOS and Android Amadivayisi. Kuyinto umsebenzi kokuchofoza okukodwa.
Lokhu isipele WhatsApp futhi ubuyisele hlelo ukufunda kuphela ngokuphelele software. Ngeke ugcine, shintsha noma avuze noma iyiphi idatha kudivayisi yakho noma ifayela yokusekelayo. Sithatha idatha yakho siqu futhi akhawunti sina. Uneminyaka njalo kuphela umuntu ongakwazi ukuyifinyelela.
Isipele noma Export WhatsApp Izingxoxo
Kwenza isipele umlando wakho WhatsApp lula kakhulu kunanini ngaphambili. Ixhuma iPhone yakho / iPad nokwenza okukodwa, kubhekhaphu usebenza ngokwalo. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukuhlola kuqala bese uhlole iyiphi into ofuna futhi ukukhiphe kwikhompyutha yakho njengoba ifayela le-HTML ukuze ulifunde noma ukuphrinta.
Buyisela WhatsApp Backup iOS / Amadivayisi Android
Ekhuluma WhatsApp amafayela yokusekelayo, ungakwazi ukuyisusa kusuka kwikhompyutha yakho uma ungafuni ukuba abagcine, futhi ungakwazi ukubabuyisela-iPhone / iPad noma Android amadivayisi wakho uma kukhona isidingo esinjalo. It kungenziwa ngaphakathi okukodwa.
100% isofthiwe ephephile, kungekho ukulinyazwa ikhompyutha noma idivayisi yakho.
30 Usuku samahhala
Ungazama isofthiwe mahhala izinsuku ezingu-30.
Asekelwe WhatsApp Amafayela
Noma yimuphi nezinamathiselo ifayela
iOS 10, iOS 9 ngaleso sikhathi nalabo bangaphambili
dr.fone yamathuluzi Siza ngempumelelo kimi adluliselwe idatha Whatsapp kusuka Ucingo yami endala ye-Android ku-iPhone yami entsha SE.
dr.fone yamathuluzi kuyinto isicelo professional eklanyelwe alulame amafayela kusuka divayisi ye-Android ngokuqondile alulame SMS asusiwe noxhumana nabo, kubandakanya amagama, izinombolo kanye e-mail, ukuze akhiphe HTML, kanye izithombe namavidyo walahlekelwa ngenxa ukususwa.
Ukwaneliseka le software kuhle kakhulu ukubuyisela idatha WhatsApp.
Isipele WhatsApp Imilayezo Online Android ne-iPhone
Indlela Buyisela WhatsApp Imilayezo ku-iPhone ne-Android Amadivayisi
Indlela Phinda Isuse WhatsApp Google / Isithombe
Indlela Backup noma Export Whatsapp Imilayezo esuka iPhone
Indlela Buyisa WhatsApp Imilayezo ku-iPhone
WhatsApp Backup extractor: Funda WhatsApp Izingxoxo kukhompyutha yakho
6 Izindlela Isipele WhatsApp Imilayezo
Top 10 Mahhala WhatsApp yokutakula Software
Kalula isipele nokubuyisela viber izingxoxo ku-iPhone yakho, iPad, noma i-computer.